I-China Norland Rope single Sofa Manufacture and Factory |I-Tailong
Usofa oyedwa wentambo yaseNorland
Iqoqo elimangalisayo likasofa waseNorland linikeza ukuqina okungenakuqhathaniswa nokunethezeka okuhle, okwenza leliphupho libe kunoma yisiphi isikhala sangaphandle.Kufakwe netafula letafula le-teak elifakwe ngokhuni kanye nezindawo zokubeka izingalo ukuze kuzizwele, "isimo sethambo lenhlanzi" ukugoqa kwentambo elukiwe ngohlaka oluqinile lwamalahle olumpunga oludala indawo yokuphumula ekhangayo futhi ethule idizayini enomoya yokuzizwa ethokomele futhi eshaya kamnandi. , lokhu kuzoba isengezo esihle kunoma iyiphi indawo yokuphumula yangaphandle.
UKUKHANYA KANYE NOMOYA
Intambo ethambile eyindilinga yayilolonge iphethini “yethambo lenhlanzi” elukwe nohlaka lwamalahle olumpunga lwe-aluminium kuyilapho idala umuzwa okhanyayo nonomoya.Kuyisikhathi esikahle sokungcebeleka kanye nesihamba naye eholidini ukuze uphumule futhi ujabulele.
IGUMBI KANYE OKUQINILE
Isiqephu esinjalo esibanzi nesiqinile sihlanganisa izindawo zokuhlala ze-teak eziyisicaba zaseNingizimu Melika ezinomklamo ovulekile onama-arc-angled back ongakwazi ukuxoxa nabangani ngokunethezeka, futhi uzozizwa unethezekile njengoba uchitha amahora amaningi ungaphandle okuhle.
INDLU EPHEFUMELA KANYE NE-FLUFFY
Indwangu ephefumulayo kanye ne-Fluffy: Indwangu ye-olyfin emelana ne-UV isebenzisa i-tint emaphakathi ukuze ibukeke i-chic ehlanzekile.Umcamelo owugqinsi ongu-12cm kanye nomcamelo ongemuva ongu-10cm phakathi kwegwebu eliphakathi nendawo njengoba uqinile futhi kulula ukuwuhlanza.
* 1200 amahora Olyfin
Isofa elilodwa laseNorland
Okwedlule: Itafula lekhofi elisebenzayo (I-Teak top)
Olandelayo: I-Norland rope 3-seat sofa(Teak armrest)
Usofa oyedwa wentambo kaLatina
Usofa oyedwa wentambo yobuciko